3GP (format file 3GPP) waa qaab weel multimedia isticmaalaan telefoonada gacanta ah. Waa qayb aad soo fududeeyay oo ah qaab MP4 iyo in la qorsheeyay in la sameeyo file tirada yar telefoonada si mobile karin video. In this article, waxaan soo bandhigi doonaa qalab aad u sahlan in la isticmaalo: Wondershare 3GP magaabay iyo splitter, taas oo loo isticmaali karaa in ay u kala waaweyn clips 3GP video galay files yar, ama lagu soo saaro fariimaha muhiimka ah ee wax videos la kordhin .3gp. Raac talaabooyinka ku saabsan in ay soo koobayaan aynu nahay iyo waxaad yeelan doontaa jirin wax aad video 3GP jarida waayo-aragnimo.
Si aan ku bilaabo, download iyo rakibi this magaabay 3GP smart - Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( ? Ma u baahan tahay version Mac ah Fiiri Wondershare Filmroa u Mac (Originally Wondershare Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac)) ). Markaas raacaan tutorial tallaabo-tallaabo hoos ku qoran si aad ayi files 3GP.
1. Sida loo gooyay 3GP files
2. Cool jaraya 3GP / splitters dib u eegista Kale
1. sida loo gooyay file 3gp la Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor)
1. Ku dar files 3GP in Wondershare 3GP qalab goynta
Waxaa jira laba siyaabood oo kala duwan oo aad u ku darto files 3GP in this splitter 3GP. Hit ah "Import" button on menu ugu weyn ee interface in ay caleenta your computer ka dibna dajiyaan doonayay files 3GP si aad u album this app ee. Ama waxaad sidoo kale ku dari kartaa faylasha aad by si toos ah waxayna jiidayeen iyo iyaga tagtey galay album this app ee.
2 Goo 3GP video clips
Jiid mid ka mid ah ilaha files 3GP ka album si ay waqtiga ugu hooseysa. Markaas ka guurto sare ee Tusiyaha Waqtiga cas oo si rid at hal dhibic aad rabto, guji icon maqas-sida, guuraan Tusiyaha Time si ay u meel kale, oo mar kale ku dhuftey icon maqas ah. Sidaas, waxaad ka dillaacisay kartaa file 3GP soo galeen dhowr clips.
Haddii aad rabto in ayi file weyn 3GP dhowr files yar-size, waqtigan, waxaad u baahan tahay badbaadin mashruuca oo dhan u gurmad ujeedada. Markaas, dajiyaan mashruuca badbaadiyey mar kale iyo mar kale in ay tirtirto clips siyaado ah oo kaliya dhoofin mid ka mid ah oo keliya galay file hal mar kasta.
Laakiin haddii aad rabto in aad soo gooyay qaar ka mid ah qaybaha aan la rabin ama lagu soo saaro qaybo ka mid ah aad rabto, kaliya ka dhacay clips ku aadan rabin oo guji icon "Delete".
3 dhoofinta ee clips intiisa kale 3GP
Markii wax walba la sameeyo, kaliya riix "Abuur" button inay u dhoofiyaan file cusub. Wakhtigan, suuqa kala pop-up la arbushin doonaa in laydin doorto dariiqada wax soo saarka ah. Haddii aad doonaysid in aad sii faylka qaab 3GP, kaliya ay tagaan qaab category iyo dooran 3GP format sida wax soo saarka. Ka dib markii in, aad file wax soo saarka ka heli kartaa sida ay waddada wax soo saarka.
Wondershare 3GP magaabay iyo splitter sidoo kale kuu ogolaanaysaa inaad si toos ah geliyaan in mid ka mid ah kuwa goobaha video qaybsiga caan ah sida Youtube, Facebook, vimeo iwm ama inay u dhoofiyaan si wax Qalabka telefoonada gacanta oo caan ah.
Sidoo kale iska hubi hoos video tutorial ku saabsan sida loo gooyay / jar / 3GP kala gudbiyo talaabo talaabo ah:
Qaybta labaad, jaraya kale 3GP lacag la'aan ah users
Wondershare 3GP magaabay kuu ogolaanaya in aad kaliya ma ahan jaray ama jar aad 3GP videos, laakiin sidoo kale aad bixisaa noocyo kala duwan oo ka mid ah qaababka kale tafatirka qabow si aad awoodo inaad si fudud u sameeyo Hollywood-sida filimada istareexsan ee gurigaaga. Haddii si kastaba ha ahaatee, aad raadinayso kaliya ee qaar ka mid ah qalabka Goynta 3GP xor ah oo fudud, idinku ma qabto wax baahi kale oo tafatir, markaas kuwan soo socda ka jari 3GP free noqon doonaa qiimihiisu aad u eegto. Waxaan ku qoran saddex iyaga ka mid ah oo aan tixgelin doonna sida ugu fiican ee aad tixraac.
1.) Free Video magaabay
Free Video magaabay waa aalad free goynta kaas oo awood kuu si ay u dhinto aad video 3GP fudayd. Ma aha oo kaliya sameeya 3GP software taageero, laakiin waxa ay sidoo kale ula qabsan kartaa kale oo dhowr ah qaabab video. Geedi socodka goynta laftiisa waa mid fudud, waxa ay qaadataa akoonka audio iyo xitaa subtitles oo kuu oggolaanaysa in aad walwasho kaliya oo ku saabsan barta saxda ah aad dooneyso in aad ka gooyay aad video, sida codsi wanaagsan goynta tahay in ay sameeyaan.
2.) Moo0 Video magaabay
Waxa kale oo aad u fududahay in la isticmaalo barnaamijka taasoo ay taageertaa 3GP. Waxay abuurtaa nuqul ka mid ah qaybta aad rabto in aad la gooyaa oo sii hayo, taasoo ka dhigeysa in aad walwalo oo lacag la'aan ah inay sameeyaan waxa aad rabto inaad la file asalka. Qaabab Video taageeray yar yihiin Free Video magaabay. Hubi in aad eegto haddii aad file asalka ah waxaa lagu taageeray haddii aad jarida video clips ahayn 3GP.
3.) Weeny Free Video magaabay
Barnaamijkan wuxuu ku darayaa tayo kale oo waxtar leh si isku dhafka ah, iyagoo si loogu badalo jeexan in qaab kale ee Daqsi, iyo xataa qabsato heerka jir, goobaha audio iyo wixii la awoodo. Sida aad fili laga yaabaa, la raaciyay qoreysa interface ee video magaabay tani waa wax yar ka soocay kuwii, laakiin weli waa sahlan in ay ku shaqeeyaan iyo qof kasta oo bilaabi kartaa jarida videos shan daqiiqo ah laga bilaabo si ay u isticmaalaan gudahood. A gabal si fiican u ciyaaray kulankii of software ka badan aad u jari karaan faylasha aad 3GP iyo qaar badan oo kale oo ah qaabab video.
Kuwaasu waa jaraya 3GP ugu wanaagsan ee aan ku talinaynaa in aad u. Haddii aad og tahay mid ka mid ah jaraya kale oo ka khayr badan kuwa afarta in aan daboolay, ama wax su'aalo ah qabto marka aad isticmaasho, kuwaas oo 3GP qalab jaro, si xor ah u tago comments aad hoos ku qoran.
> Resource > Video > 3GP magaabay: Sida loo jar 3GP Files